လူတိုင်းသိသောချင်တယ်ဆိုရင်သင်နိုင်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အကောင်းဆုံးလိင်ဂိမ်းများ၊အင်တာနက်ကိုအကောင်းဆုံးအဆင့်ရှေ့ဆက်။ ကျွန်တော်ကခေါင်းလေးကိုမှာမိသားစုညမ်းဂိမ်းများနှင့်ပြိုင်ဘက်အဖြစ်အခွင့်ထူးများ၊နိုင်မှသင်ပြောပြအကြောင်းကိုအားလုံးမိသားစုညမ်း။ ကျနော်ပထမဦးဆုံးစတင်ဒီအတယ်၊အဆင်ခြင်သည်:ငါမြင်စျေးကွက်အတွက်ကွာဟချက်ငါပဲသိခဲ့ကြောင်းပြည့်စုံလိမ့်။, ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အထွက်ရပ်ရှိပါတယ်တကယ်အောင်မြင်အသက်ရှင်ဖို့အထိမျှော်မှန်းပြီးတော့ကျွန်မအထင်ကြီးစွာသောရှက်ပိုဝက်ဘ်ဆိုက်များကမ္ဘာပေါ်တွင်ဝန်ခံကတိပြုပြီးတော့ပျက်ကွက်ကယ်နှုတ်ဖို့ဘာမှမမှာအားလုံးလျောက်ပတ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိဖို့ဟန်ကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်ကြတာမဟုတ်:အထူးသဖြင့်အခါ၊ဒါလွယ်ကူသောင်မှရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပေးသင်သင်သည်အဘယ်သို့အလိုရှိသော။ ဒါကြောင့်၊ကျနော်တို့အနေနဲ့သင်ျသံုးေရောက်လျှင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့ကြောင်းကိုသင်မရရ–ဖြစ်နိုင်သည်အကောင်းဆုံးသောခေါင်းထွက်ပေါက်အဖြစ်လျင်မြန်စွာတတ်နိုင်သမျှ။, ဤစီမံကိန်းသည်အားလုံးလောက်ဖြစ်လာဟိုအချက်အချာကြောဂိမ်းစွဲချင်သောနိုင်စေဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါအပူနှင့်ယုတ် XXX။ ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ? တစ်ခုခုကိုတက်လက်မှတ်ထိုးချက်ချင်းသို့မဟုတ်ပဲဖတ်အောက်များအတွက်ပိုမိုအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အပေါ်အဘယ်အရာကိုမိသားစုညမ်းဂိမ်းများဒါကြောင့်ကြယ်!
အများကြီးကားထွက်ရှိပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်ပြေးဆင်းတူညီသောလမ်းကြောင်း:သင်ရှိသည်ရန်မအစစ်အမှန်အရှိအခေါင်းစဉ်နဲ့ကတော်တော်ကြီးအမြင်အာရုံဝတ္ထု။ ဒီရိုကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေကိုရှောင်ရှားရန်မည်သည့်နှင့်အတူခေါင်းစဉ်ရရှိနိုင်သောဖြစ်ကြောင်းအတွင်းမိသားစုညမ်းဂိမ်း၊အရာသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှကျူးလွန်သငျသညျသို့ဆောင်ခဲ့မှအမျိုးမျိုး၏နံပါတ်အတည်ထောင်သူများနှင့်ထောင့်အတွက်ဖြန့်ချိကြပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းအသင်ျကြောင့်၊အဲဒါတွေအများကြီးတစ်ငရဲ၏ထိန်းချုပ်မှုကျော်ဖြစ်ပျက်။ ဥပမာအားဖြင့်၊သည့်မိသားစုဝင်လုပ်သင်အမှန်တကယ်အတူခံစားရတဲ့အဆင်းနှင့်ညစ်ပတ်နှင့်အတူ?, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်ချင်မင်း၏နှမ၊သို့မဟုတ်သင့်မေမေအ–အဘယ်သူသိတယ်? ဆိုတာတောထွက်ရှာဖွေသော်လည်း! အို၊သင်ပြုတစ်ချိန်ကအပေါ်ဆုံးဖြတ်ပစ်မှတ်:ဖွင့်အဘယျသို့သင်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်သွား? အဘယ်မှာသင်ပြုချင်အရပ်သလား? သင်၌စိတ်ဝင်စားသွားအားလုံးလမ်း၊ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံရချင် jerked? ကျွန်တော်ထင်သည့်အခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊မိသားစုညမ်းဂိမ်းဒီနေရာမှာသင်ပြကြောင်းရှိခြင်းအဆိုအတွက်အရေးယူစေသည်ကားအဘယ်သို့ဂိမ်းကောင်း။, ကျွန်တော်တို့ပို့သင်အကောင်းဆုံးသောဝန်၏အရသာပစ္စည်းကိုပတ်ပတ်လည်ပါတယ်မကြောက်ကြောင်းဝန်ခံဖို့ကျနော်တို့ဒီအကောင်းဆုံးလိင်ပုံစံမိသားစုဂိမ်းကစားတယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အခြားသူများဖို့ကြိုးစားလာကြရင်းနှီး–သူတို့အမြဲပျက်ကွက်!
အစည္းဒြပ်စင်မှာမိသားစုညမ်းဂိမ်းများသည်ကြီးမြတ်လျှင်၊သင်သည်အစဉ်အရမည်သည့်အချက်မှာညပ်အတွက်မည်သည့်ဂိမ်းအဖြစ်ပူးပေါင်းဖို့သေချာဖက်ဆာဗာနှင့်သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အစည်းများ၏ကူညီနိုင်သူတွေများထဲကသင်တို့သည်အချဉ်သင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့။ ကၽြန္ေတာ္တိုငြူစူခြင်း၏အခြားပလက်ဖောင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမှယူတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်လွန်း–ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ဖတ်ပြီးဘယ်အဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိကြောင်းပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းနိုင်အောင်ကျနော်တို့ထားေသာအဆိုပါဂိမ္း၊ဂရပ်ဖစ်၊အကွက်များနှင့်အခြားအရာခပ်သိမ်း။, ငါတို့သည်လည်းတရားဝင်ဖိုရမ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အဘလော့ဂ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တက်စောင့်ရှောက်ရန်နေ့စွဲအပေါ်အားလုံး၏နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်စိတ်အားထက်သန်နှင့်အတူမျှဝေဖို့။ အရေအတွက်ရှိပါတယ်ထင်ရှားသောနေရာများထွက်ရှိရန်ကြိုးစားသောဂတိတော်သင်ကမ္ဘာနှင့်တိုတိုတက်လာကြ:အားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောရတွေအများကြီးညမ်းဂိမ်းများများအတွက်သင်ကြိုးစားဖို့ကျွန်မတို့ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာသင်တို့အဘို့အသူတို့ကိုယူမှအဘို့စမ်းသပ်မောင်းနှင်! တကယ်မဖြစ်ခဲ့ပြီပိုကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ်တွင်သင့်လက်ကိုရရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှရတယ်ကိုဆက်ကပ်၊ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်ဦးကြည့်ရှုယူဝိုက်နှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ရာကိုအနာဂတ်၏ညမ်းဂိမ်းနဲ့တူလှပါတယ်။, ဤသည်သင်ျကောင်းကင်ဘုံလည်း–နှင့်အတူမည်သူမဆိုမိသားစုမင်းလိန်သွားဖို့အိမ်မှာမှန်ခံစားရမှာပါ။
ကျွန်တော်ထင်တာကများ၏ကျန်းမာဆေးထိုး shilling ပြုပြီးမှငါ၏အရှုထောင့်:သင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြနေတာကိုအကြီးအကျယ်ပရိတ်သတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်အစစ်မှန်သောယုံကြည်သောသူတယောက်မျှမထွက်ရှိနိုင်ကိုင်တစ်ခုဖယောင်းရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပေးသွားမှာပါ။ အခုစိတ်ထဲတွင်ထိုအတူ၊သင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်အပြီးမှလာကိုယ်အဘို့မြင်စေသည်ဘာကိုမိသားစုညမ်းဂိမ်းများထံမှကွဲပြားခြားနားသည်အခြားနိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ထွက်ရှိပါတယ်? ကောင်း–အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးထက်လျော့နည်းကြာ ၆၀ စက္ကန့်နှင့်သင်မကြာမီကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရုံမည်မျှအရေးယူ၏ကောင်းတစ်ခုထိုး XXX။ မင်္ဂလာ fapping မှတ်မိ:အဘယ်သူမျှမပါဘူးသင်ျအတော်လေးတူမိသားစုညမ်း။